gvSIG 2.0 iyo Maareynta Khatarta: 2 ku soo dhawaatay webinar - Geofumadas
gvSIG 2.0 iyo Maareynta Khatarta: Shabakada webka ee 2 ayaa soo socota
Mee, 2013 Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GvSIG
Waxaa xiiso leh sida bulshooyinka barashada dhaqameedu ay u kobceen, iyo wixii horeyba looga baahnaa qolka shirarka leh dhibaatooyinka fogaanta iyo meelaha, iPad-ka waxaa laga arki karaa meel kasta oo adduunka ah.
Xaaladdan oo kale, waxay aad ugu dhowdahay in la horumariyo laba webinjir ah oo aan dhammaanteen ka faa'iideysan karno, iyada oo tixgelineysa in arrintaan lagama maarmaan tahay in laga tago xafiiska ama shaqada caadiga ah:
Tani waxay noqon doontaa 7 ee Maajo oo waxaa hormariya MundoGEO iyo Ururka GvSIG.
Lagacna aad 7 May oo ka mid ah bandhigga ka mid ah qaababka cusub oo ka mid ah version cusub gvSIG, iyo waa fiican ee sahaminta kala duwan ugu weyn ee u dhexeeya line this iyo versions 1.12x mar dambe la sii wadi doonaa horumarka ka dib maturity ee version this gaaray shahaadada la sii deynayo oo ah mid deggan. Sidaas darteed waxa xiiso leh in la ogaado tallaabooyinka la qaadi doono bilaha soo socda.
Iyadoo diiwaangelinta bilaashka ah, dhacdada internetka waxaa loogu talagalay dhammaan gvSIG Isticmaalayaasha Isticmaalayaasha iyo horumariyeyaasha kuwaas oo xiiseynaya inay ogaadaan sifooyinka muhiimka ah ee version 2.0, iyo mustaqbalka.
Afhayeenku wuxuu noqon doonaa Álvaro Anguix, Agaasimaha Guud ee Ururka GvSIG. Ka-qaybgalayaasha webinar waxay awood u yeelan doonaan inay dhex-dhexaadiyaan sheekeysiga, iyagoo sidoo kale awood u leh in ay raacaan munaasabadda via Twitter (@mundogeo #webinar). Dhammaan kaqeybgalayaasha internetka ee siminaarkan waxay heli doonaan shahaadooyin ka qaybgalkooda.
Ku soo biir shabakadaan!
lagacna: gvSIG Desktop 2.0
Taariikhda: 7 ee Maajo ee 2013
buurta: 14: 00 GMT
Marka diiwaangelinta la dhammeeyo, waxaad heli doontaa email xaqiijin ah oo xiriir la leh shabakadan.
Qalabka Nidaamka: PC - Windows 7, Vista, XP ama 2003 Server / Macintosh-Mac OS X XUMM ama cusub / Mobile - iPhone, iPad, Android
Isdiiwaangelinta bilaash ah ee boggan:
Maareynta xaaladaha degdega ah ee cusub iyadoo la isticmaalayo Cartography
Tan waxaa loo dallacsiiyey by Tilmaamaha Magazine, halkaas oo aad ka baran doontaa sida macluumaadka diyaarsanaanta Response ee Crisis kooxda sameeyey diyaar u ah shaqaalaha gurmadka degdegga ah iyo dadwaynaha xilliyada Hurricane Sandy. Isticmaalka qalabka geospatial, sida Google Maps Engine, Kooxda Crisis Response shaqeeyay dhowr hay'adood oo masiibo la xiriira si ay u ururiyaan iyo wadaagaan macluumaadka iyada oo dhibaatooyinka maps, ah aalad il furan ee ay kooxda. Khariidadda laymanka Sandy 50 + waxaa ka mid ah:
Raadinta goobta, oo ay ku jiraan jidadka harikeyn ee hadda iyo kuwa la filayo, oo ku qanacsan Xarunta Duufaanta Qaranka NOAA
Digniinada dadweynaha, oo ay ku jiraan ogeysiisyada daadguraynta, digniinta duufaanka iyo wax badan, iyada oo la marayo weather.gov iyo dhulgariir
Radar iyo dariiqooyinka daruuraha ee weather.com iyo sheybaarka shidaalka ee Maraykanka.
Macluumaadka iyo kaararka daadgureynta, oo ay ku jiraan NYC gaar ah NYC jidadka ka-guuridda macluumaadka
Guryaha iyo xarumaha soo-kabashada, saldhigyada gaasta furan iyo kuwo kale
Waxa laga filayo:
Casharrada laga bartay kooxda Kooxda Wax ka Qabashada Qalalaasaha ee la xiriirta khariidadda dhibaatada hadda jirta
Iyadoo kooxdu ay adeegsanaysay dadwaynaha si ay u ilaaliso mid ka mid ah lakabada map-ka ugu caansan
Qalab noocee ah sida Khariidadda Dhibaatada iyo Khariidadaha Khariidadaha Google ayaa kaa caawin kara shaqadaada deg-degga ah
Goob-joogeyaasha waxaa ka mid ah Christiaan Adams oo ka socda Google Earth iyo Jawaabta Google ee Dhibaatada, iyo Jennifer Montano, oo ah maamulaha juquraafiyadda qaran.
Nagala soo xiriir 9 May 2: 00 PM - 3: 00 PM EDT
Qof kasta oo xiiseynaya aaladaha Google geospatial, gaar ahaan kuwa ku lug leh xaaladaha maareynta xaaladaha degdega ah
PC PC leh Windows 7, Vista, XP ama 2003 Server
Haddii ay tahay Macintosh Mac OS X XUMM ama cusub
Hadda iska qor
Post Previous«Previous GeoConverter waxay kuu oggolaaneysaa inaad xakameyso nudaha adag ee nidaamka XSD
Post Next MundoGEO # Isku-shaandhaynaya guusha 2013Next »